डिपीएल अक्सन : कुन खेलाडी कतिमा अनुबन्ध ? - Himalayan Kangaroo
डिपीएल अक्सन : कुन खेलाडी कतिमा अनुबन्ध ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १० फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०३:१६ |
काठमाडौं । दोस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको अक्सनमा करण केसी, आरिफ शेख, वसन्त रेग्मी तथा सागर पुन सबैभन्दा महँगो खेलाडीको रुपमा बिक्री भएका छन् ।
ती चारैजना खेलाडी छुट्टाछुट्टै टोलीमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँमा विकेका हुन् । केसी र शेखलाई महेन्द्रनगर युनाइटेडले किन्यो भने रेग्मीलाई विराटनगर किंग्सले तथा पुनलाई रुपन्देही च्यालेन्जर्सले खरिद गरेको हो । त्यसैगरी, पृथु बाँस्कोटा विराटनगरमा आबद्व भए । उनलाई विराटनगरले एक लाख २० हजार रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको हो । सोही रकममा नरेश बुढाऐरलाई काठमाडौँ गोल्डेन्सले खरिद गर्यो ।
त्यस्तै, विराटनगरले एक लाख रुपैयाँमा रामनरेश गिरी, पवन सर्राफ, सौरभ खनाल, दिलीप नाथ र अनिल कुमार शाहलाई अनुबन्धन गर्यो । सिवाइसी अत्तरियाले कुशल भुर्तेल र कृष्ण कार्कीलाई पनि जनही एक लाख रुपैयाँमा नै अनुबन्धन गर्यो भने काठमाडौँ गोल्डेन्सले अमित श्रेष्ठ, किशोर महतो, ललित राजवंशीे र साहव आलमलाई एक/एक लाख रुपैयाँमा किन्यो ।
यता महेन्द्रनगरले रोहितकुमार पौडेल र भुवन कार्कीलाई अनुबन्धन गर्यो । उनीहरुलाई जनही एक लाख रुपैयाँमा किनेको हो । रुपन्देही च्यालेन्जर्सले बिक्रम कुमार भुषाल, सुशन भारी र सिद्धान्त लोहनीलाई जनही एक लाख रुपैयाँमा अनुबन्धन गर्यो। टिम चौराहा, धनगढीले ललित भण्डारी, योगेन्द्रसिंह कार्की, सोनु तामाङ र सुनिल धमलाका लागि जनही एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो ।
अन्नपूर्ण होटलमा बुधबार सम्पन्न अक्सनमा १८७ खेलाडीको नाम दर्ता भएको थियो जसमा ७२ खेलाडी अक्सनमा बिकेका हुन् । धनगढीमा आगामी चैत १७ देखि वैशाख १ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगितामा टिम चौराह धनगढी, सिवाइसी अत्तरिया, महेन्द्रनगर युनाइटेड, रुपन्देही च्यालेन्जर्स, काठमाडौँ गोल्डेन्स र विराटनगर किंग्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
प्रतियोगिताका विजेताले २५ लाख तथा उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । रासस
Previousकर्मचारीको एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ता माग
Nextअष्ट्रेलियाको सिड्नी हार्बरमा भेटियो दोस्रो विश्वयुद्धको बम !
शीर्ष स्थानमा फर्कियो लिभरपुल
१८ कार्तिक २०७५, आईतवार ०१:४७
फुटबलर क्रिष्टयानो रोनाल्डोमाथि २ वर्ष जेल सजाय
२ असार २०७५, शनिबार ०३:२९